Ukudala - ke kungokudingekayo zokuphila kwanoma iyiphi inhlangano. Yilokhu iletha eseyintsha umsebenzi, ngaleyo ndlela besiza yokulwisana mncintiswano.
Yiqiniso, lena akuyona inqubo unomphela, okuyinto njalo isifika uqobo. Ngaphezu kwalokho - akakhulumi ukwamukela yonke indawo. Endaweni ukukhiqizwa, okuyinto akuhloselwe ukukhuthaza ukuba futhi sikhuthaze ukucabanga, izisebenzi ngezinye izikhathi abakwazi ingaxazululwa noma wesaba ukunikela imibono yabo. Leyo nhlangano sibheke ngoba ilahlekelwe eningi imibono ukuthi kungaba nomthelela wokukhula okuthe ukukhula. Futhi konke wukuthi azikho nemibandela ukucabanga.
Ukuze ugweme lokhu, kudingeka ukwakha isimo sokusebenza ukuthi hhayi kuphela akuvimbeli, kodwa futhi ukhuthaza ukudalwa nokukhuphula ezikhundleni lokusungula. Indlela ukukwenza? Ezikhundleni zobuholi phakathi kwenhlangano nakanjani zikhona imisebenzi emine esemqoka. Omunye umbuzo - umqondisi sikwazi kangakanani ukuvumelana nezimo futhi okudala ngokwalo lisho izinjongo zabo.
1. Ukuzibekela imigomo ecacile
Ngaphandle kokubeka imigomo Yiqiniso, akunakwenzeka. Kodwa ukunikeza abasebenzi yakho ilungelo futhi bheka izindlela ukuyifinyelela ngayo. Abantu abasebenza eduze kufanele bathakazeliswe kanye nesithakazelo kulokho abakwenzayo ukuze ube nomdlandla. Awusoze uwufinyelele, uma nje anikeze imiyalo, ovele ebheka phezu kwehlombe lakhe hhayi enika abanye kungekho inkululeko ekwenzeni izinqumo. Futhi awukaze ababonakala ngazo labo abasenkolweni uzokwazi ancike.
2. Ukulawula kanye nebanga
Lapho iqembu lakho abasebenza umsebenzi owodwa, kudingeka silandele le nqubo. Into esemqoka - Ungeqisi it. Kukhona umugqa omncane phakathi isithakazelo futhi ngenxa ayehlasela isikhala siqu ukusebenza, futhi ngezinye izikhathi baze bazame ukumbeka ukusebenza. Nikeza abantu nenkululeko ukusebenza at ijubane lakho siqu futhi ngizama ukuba nesineke inqubo. Le ndlela engcono - ukulalela futhi ukubasiza banqobe noma iziphi izithiyo abangase bahlangabezane nako ngesikhatsi kokuhlinzwa. iseluleko Lungisa futhi ukucabangela kungaba wusizo kakhulu ukugcwaliseka imibono kanye ukuhlonza abaholi zicacile kodwa ukuphazamiseka sina ingcindezi kungaba ijubane futhi sibabulale ngisho nokubabulala lokusungula.
3. Yigcine ilula, futhi lula umsebenzi ithimba lakho
Uma ufuna ukulondoloza isimo sengqondo sezisebenzi okusezingeni eliphezulu futhi ube nombono oqondile phakathi nabasebenzi bakho, uqaphele ekugxekeni kanye nokulawula imizamo yabo. Better ukusekela izinkanuko zabo zokudala - ukuze abanikeze amathuluzi adingekayo ukukhuthaza umqondo ku ukuhamba komsebenzi jikelele, noma ngisho emakethe, uma kunesidingo.
Lokhu kuzosusa yonke izithiyo umgomo, ukwandisa bayasethemba amalungu ethimba abanamakhono. Ekugcineni, okusebenza ku idumela lakho futhi isikhundla eqenjini: abasebenzi uzobona ukuthi banayo umphathi engcono esekela zonke emitameni zokudala. Futhi uma njalo ukuvikela izithakazelo iqembu lakhe ngaphambi kweminye iminyango noma izimbangi - uma ungumuntu umholi omuhle ngempela.
4. Isizukulwane kanye nokuhlola imibono creative - lezi yizinto ezahlukene
imibono Creative eqhulwini ngenqubo emisha, futhi kukhona izinyathelo ezisemqoka okumelwe zithathwe ukuze impumelelo ekusebenziseni kwabo. Kodwa kukhona iphutha elivamile lapho isizukulwane udidekile imibono nge yokulinganisa zabo zebhizinisi. Leli phutha njalo inomthelela omubi inqubo emisha. Lezi imiqondo emibili okufanele ahlukaniselwe, ngoba izinto ezahlukene ngokuphelele.
Generation imibono - inqubo okufanele ugxile ubuningi. Ngamafuphi nje, ayikho imibono ezimbi kungcono banemibono nanhlanu ongakhetha kuzo emihlanu, noma okungenani oyedwa nokuma. Ngaphezu kwalokho, uma kukhona ingozi yenchubomgomo okungalungile ukuyeka isinyathelo ihlumela ngendlela efanele usaqala, ngaphandle emnika ithuba ukuze ukhule ube umuntu engaba ukufohla izixazululo.
Ukuhlolwa imibono - indiza ehluke ngokuphelele, ugxile umsebenzi ukuqaliswa esisebenzayo, imigomo yesikhathi eside. Ukuze wenze lokhu, sitadisha kungenzeka iqembu lochwepheshe, imithombo yenkampani, abheke ukuthi kungenzeka nokunye.
Ukudala imvelo zokudala inkampani, abaphathi kumele aqaphele ukubaluleka umnikelo abasebenzi bayo kanye njalo ngifuna indlela ukubasiza abelethe nokuthuthukisa imibono emisha. A izinga elithile kokuqondisa kufanele kugcinwe, kodwa abangaphansi kufanele anikezwe inkululeko nganoma iyiphi kakhulu ukuba afinyelele imigomo yabo izindlela zabo. Ngamanye amazwi, isinyathelo akufanele bajeziswe, kunalokho okuphambene.
Kutfutfukiswa imvelo zokudala - yilokhu ehlukanisa inkampani omuhle ovela Okuqukethwe akuzwakali. Ukungabikho ezinjalo, kubaluleke kakhulu inkampani kunoma iyiphi emakethe ukuncintisana.
Bezakhiwe functionalism T. Parsons futhi R.Merton
Ezokuthutha Kiev, Central Bus Station
Amakha amadoda Good sika: isilinganiso ukubuyekezwa. Iphunga zabesilisa: phezulu ohamba phambili ku umbono yabesifazane